China Abenzi bewolfberry kunye nabathengisi | HEX
Xa antipyretic kunye nefuthe antitussive.
Isiqhamo (esibizwa ngokuba yi-wolfberry kumayeza amaTshayina) sinomsebenzi ofanayo nonyango njengalowo we-wolfberry e-Ningxia; Ingcambu yeengcambu (ebizwa ngokuba yi-digubar kunyango lwesiTshayina) inefuthe le-antipyretic kunye nokunciphisa ukukhwehlela.
ILiccium barbarum polysaccharide:
ILiccium barbarum polysaccharide yinyibilikisi yamanzi enyibilikayo yamanzi kunye nesona sithako sibaluleke kakhulu eLycium barbarum. Ubunzima bayo be-molecular molecular is 68-200, eye yaba yindawo yophando ekhaya nakwamanye amazwe. Phakathi kwazo, olona phononongo lufundwe kakhulu ngumgaqo wokuzikhusela komzimba kunye ne-anti-tumor. Izifundo ezininzi zibonise ukuba i-Lycium barbarum polysaccharide inemisebenzi yokukhuthaza ukukhuselwa komzimba, ukulwa nokuguga, i-anti-tumor, ukukhusela i-radicals yamahhala, ukulwa nokukhathala, ukulwa ne-radiation, ukukhusela isibindi, ukukhusela nokuphucula umsebenzi wokuzala, njl.
Igama leekhemikhali yi-1-carboxy-N, N, N-trimethylaminohydantoin, efanayo ne-amino acid kulwakhiwo lweekhemikhali kwaye zezesiseko se-amine quaternary. I-Betaine yenye yee-alkaloids eziphambili kwiziqhamo ze-wolfberry, igqabi kunye nesiqu. Impembelelo ye-wolfberry kwi-lipid metabolism okanye i-anti-fatty liver ibangelwa ikakhulu yi-betaine equlethwe kuyo, esebenza njengomthengisi we-methyl emzimbeni. Uphando malunga neLycium barbarum betaine lilinganiselwe kuphando lwasekhaya malunga nokuzimisela komxholo, itekhnoloji yokutsala kunye nefuthe lomzimba kwizityalo zeLiccium barbarum (ukonyusa ukunyamezelana kwetyuwa). Zimbalwa izifundo kwiziphumo ze-pharmacological yeLiccium barbarum betaine
IPolygonati Odorati Rhizoma